एमालेजन, राजेन्द्र पाण्डे रोज्ने कि मनमोहन ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
एमालेजन, राजेन्द्र पाण्डे रोज्ने कि मनमोहन ???
चिकित्सा शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदले ल्याउन सकेन । संसद विघटन भए पनि सुधारको क्रम निरन्तर चलिरहनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ ।
ऐन बनाउने संसद नभएको अवस्थामा कानुन जारी गर्नुपर्ने देखियो भने अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने संविधानको धारा, ११४ मा उल्लेख छ । सरकारले अध्यादेशको आवश्यकता महसुस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्न मिल्दैन । किनकि राष्ट्रपति छुट्टै शक्ति केन्द्र होइन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्ने अधिकार छैन ।
अब अध्यादेशमार्फत लागू ऐन सरकारले कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ । यो कानुन बमोजिमका संयन्त्र बनाउन थाल्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न काम थाँती छन् । यिनै काम गर्नका लागि ऐन ल्याइएकाले अब तुरुन्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्छ । जसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको शून्यता चिर्न सक्छ । अहिले शून्यताको अवस्थामा फाइदा उठाउन खोजिरहेको समूहलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
संसद नहुन्जेलसम्म अध्यादेशले काम गरे पनि फेरि वैधानिकताका लागि जाने भनेको संसदमै हो । संसदले स्विकार्‍यो भने ऐनले निरन्तरता पाउँछ । स्वीकार गरेन भने निस्क्रिय हुन्छ । यदि, मौन बस्यो भने संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश निस्क्रिय हुन्छ । त्यसैले अध्यादेश एउटा अल्पकालीकन प्रबन्ध मात्रै हो ।
नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बनाउने धारणा राजनीतिक पार्टीहरुले अघि सारिरहेका छन् । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने पहिलो खुड्किलो नै यही ऐन हुनेछ । हालसम्मका कानुनमा समाजवाद उन्मुख पहिलो कानुन नै यही हो । समाजवादको मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ । किनभने, समाजवादका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सबैको समान पहुँच हुन जरुरी छ ।
भाषणमा देशलाई समाजवादतिर उन्मुख बनाउने भन्ने तर समर्थन नाफाखोरी बजारको गर्ने दोहोरो चरित्रको पर्दाफास पनि यही ऐनले गर्नेवाला छ । जसले समाजवादको मर्ममाथि प्रहार गर्न थाल्छ, ऊ माफिया हो भनेर चिन्न गाह्रो हुनेछैन ।
अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन किन नपाउने ? भन्ने सतही कुराले समग्र एमालेवृत्त डा केसी र उनले उठाएका मागप्रति सकारात्मक छैनन् । सतहमा मनमोहन मेडिकल कलेज भए पनि पाण्डे र उनको व्यापारिक समूहले आफ्नो स्वार्थलाई पार्टीकरण गरेको छ ।
यो ऐन एकीकृत शिक्षा प्रणाली, गुणस्तरीयता, समान पहुँच, सर्वसुलभताका लागि बनेको हो । जसले गरिब जनताका जेहेन्दार सन्तानले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । जो आफ्नै लगानीमा पढ्न चाहन्छ, उसले उचित शुल्क तिरेर पढ्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले प्रा केदारभक्त माथेमा जस्ता शिक्षाविद्ले दिएको सुझावलाई सम्मान गरेको छ र डा गोविन्द केसीका माग पूरा गरेको छ । त्यसैले नयाँ आउने संसदले पनि यसलाई कानुनका रुपमा स्विकार्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
एमालेजन पाण्डे रोज्ने कि मनमोहन
नेकपा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे र उनको समूहले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको किन विरोध गरिरहेको छ ? उनीहरुले हालेका संशोधन के हुन् ? एमालेका अन्य नेताले मिहीन ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र बहस गर्न जरुरी छ । अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन किन नपाउने ? भन्ने सतही कुराले समग्र एमालेवृत्त डा केसी र उनले उठाएका मागप्रति सकारात्मक छैनन् । सतहमा मनमोहन मेडिकल कलेज भए पनि पाण्डे र उनको व्यापारिक समूहले आफ्नो स्वार्थलाई पार्टीकरण गरेको छ ।
श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारीको आदर्श विरुद्ध छन् नेता राजेन्द्र पाण्डे । मनमोहनले कल्पना गरेको समाजवाद के अहिले नेता पाण्डेले अघि सारेका मुद्दा जस्तै हो त ? एमालेजनले यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि उठाएका विषयमाथि समीक्षा गर्दा यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । उनको समूहले ३३ वटा दफामा ३३ वटै शंसोधन हालेको छ ।
एकीकृत परीक्षा प्रणालीको विरोधमा छन् उनीहरु । जबकि यही परीक्षा प्रणालीले मात्रै गरिबका जेहेन्दार छोराछोरीको डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सक्छ । ऐनले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजको नक्सा पास गर्नु नहुने तर्क गर्छन् उनीहरु । त्यसो भए मनलाग्दी संरचना बनाउने त ? विश्वविद्यालयले आशयपत्रको निर्णय गर्न नपाउने रे ! उपत्यकाभित्र जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुने हो त ? उपत्यकामै मेडिकल कलेज थुप्रिए भने राम्रा डाक्टर पनि यहीँ थुप्रिन्छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता ठाउँमा सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व होइन ?
उनीहरु विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गतको परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम विरुद्धमा छन् । यदि, डाक्टर बन्ने न्यूनतम योग्यता नभएको विद्यार्थीले पैसा र पावरको बलमा प्रमाणपत्र लिएर आयो भने उपचार त नेपालीकै गर्ने होला नि । यसैगरी, एमडी÷एमएस अध्ययनका लागि अनुभव नचाहिने र छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने माग छ उनीहरुको ।
नेपाली कलेजमा पूरै विदेशीले पढ्न पाउनुपर्ने माग कति सही हो ? नेपालीका छोराछोरी डाक्टर बन्न नपाउन् भन्ने उद्देश्य होइन यो ? यसैगरी, पाँच वर्ष पढ्नुपर्ने एमबिबिएसको शुल्क एकै वर्ष ७५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा कति न्यायपूर्ण छ ? यसैगरी, कलेजहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाउन थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विश्वविद्यालयको खातामा शुल्क पठाउने निर्णयको पनि उनीहरु विरोध गर्छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज अनिवार्य खोल्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधले नेता पाण्डेहरु जनताका पक्षमा छन् कि माफियाको भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको नियमन गर्न बनेको आयोगको पदाधिकारी तिनै कलेजका सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गर्छन् उनीहरु । यसो गर्दा स्वार्थ बाझिँदैन ? मेडिकल शिक्षा जनताका छोराछोरीको पहुँचमा पुर्‍याउने उनीहरुको चाहना हुँदा हो त, अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको लुट विरुद्ध संसदमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका भनिएका सांसद पाण्डेले संसदमा कहिल्यै बिरामी ठगिएको, अभिभावक र विद्यार्थी लुटिएको विषयमा बोलेका छन् ?
कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा व्यापार गर्ने उनको रणनीति सम्बद्ध पार्टीले बुझ्न जरुरी छ । जनताको हकहित विरुद्ध उनले चालिरहेका कदम नेता मनमोहन अधिकारीका आदर्श विपरीत छन् । नेपाली राजनीतिमा मनमोहन त्यस्तो नाम हो, जसको नामबाट खुलेको अस्पतालमा जनताले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने हो । जसको नाममा खुलेको मेडिकल कलेजबाट गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी निःशुल्क डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने हो ।
तर, सहकारीको नाम भजाएर व्यावसायिक उद्देश्यका लागि खोलेको अस्पताल र खोल्न लागिएको मेडिकल कलेजलाई एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले मनमोहनको नाम जोड्नु, उनको कतिसम्मको अपमान हो ? त्यसैले, अब समग्र एमालेजनले यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मनमोहनको जिम्मा कुनै व्यक्ति वा समूहले लिने होइन, राज्यले लिनुपर्छ । बरु, उनको नाममा दूरदराजका जनतालाई सेवा दिनेगरी प्रतिष्ठान खोल्नुपर्छ ।
माफियाकरण र भ्रम
कानुन कमजोर भएकाले अहिले विकृति देखिएको हो । बजार र राज्य प्रणाली उनीहरुकै कब्जामा भएका कारण मनोबल बढेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन आफू अनुकूल बनाउन माफियाहरु सक्रिय थिए । त्यो विफल भयो । माफियाहरुको पहुँच राजनीतिदेखि अदालतसम्म छ । उनीहरुले भ्रम छर्न पनि सक्छन् । उनीहरुको लक्ष्य नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर प्रणाली कब्जा गर्ने र त्यसैका आधारमा उपभोक्ता (अभिभाव र विद्यार्थी) लाई बाध्य पारी बजार कब्जा गर्ने हुन्छ ।
तत्कालका लागि त्यो विफल भएको छ । नेता पाण्डेले नियोजित रुपमा नेकपा एमाले र मनमोहनको नामलाई रक्षाकवज बनाएका छन् । त्यसैले पाण्डेलाई मनहमोहन सुम्पिने होइन, राज्यले लिनुपर्छ । उनले मनमोहनका नाममा गरेको लगानीको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिएको अनुदानको पनि छानविन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुती: डिबी खड्का – स्वास्थ्यखबरबाट